Yaa Hogaamiye noqon kara, maxayse yihiin tilmaamaha Hoggaamiyuhu? (Qodobbo qiime leh) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Yaa Hogaamiye noqon kara, maxayse yihiin tilmaamaha Hoggaamiyuhu? (Qodobbo qiime leh)
Yaa Hogaamiye noqon kara, maxayse yihiin tilmaamaha Hoggaamiyuhu? (Qodobbo qiime leh)
(Hadalsame) 23 Dis 2020 – Hoggaamiye waa qof lagu daydo, oo Ummadda inteeda kale u ah Tusaale oo Rabbi uu siiyay Tilmaamo sare, oo ka soocaya dadka intiisa kale.
Tilmaamahaa qaar waa lagu soo dhashaa ama la dhaxlaa, qaarna waa lagu tababartaa, ama waa lays baraa. (Waxaa la yiri saxaabi la oran jiray Mucawiye ibn abi Sufyaan ayaa ninbaa arkay isagoo yar oo hooyadiis wado, wuxuuna yiri, wiilkani wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha Carabta, hooyadiina waxay tiri; haduuna Aduunyada hogaaminin waaban gablamay).
1 – Dulqaad, oo qof aan lahayn Dulqaad oo xanaaq badan, lana dagaalamaya qof kasta Hogaamiye ma noqon karo.
2 – Deeqsinimo: qof ay ku adagtahay wax bixinta iyo gacan iska hormarintu ma hogaamin karo Bulsho, maxaa yeelay dadka qaarbaan kuu hogaan-samaynin hadaadan Afka wax u galinin.
3 – Caqli badan iyo garasho sare, si uu u kala sooci karo dhacdooyinku mudnaanta ay kala leeyihiin, waxa ka dhalan kara iyo jawaabta ugu haboon ee laga bixin karo. (waxaa la yiri doqonku wuxuu fiiriyaa cirbihiisa hoostooda, Caaqilkuna wuxuu fiiriyaa aragiisu meesha uu ku dhamaado). Marka qofka doqonka ahi meeshii uu kalmad ku jawaabi lahaa, Dagaal buu ka bilaabaa, meeshii Dagaal iyo raganimo u baahnaydna wuu ka seexdaa.
4 – Karti iyo Awood waxqabad, oo qof Daciif ah ama wax matare ahi, hogaamiye sare ma noqon karo, maxaa yeelay qofka daciifka ah waa laga talaabsan, ummaddiina waa la qabsan isagoo taagan, maadama uusan lahayn Awood lagaga haybaysto.
5 – Cilmi iyo Aqoon uu kufahmo dhacdooyinka iyo geedi socodka Aduunyada, oo qof dhoohan oo Jaahil ahi naftiisaba ma hogaamin karo maadaama ay adagtahay inuu kala garto Khayrka iyo sharta, waxa qiimaha leh iyo waxa aan qiimaha lahayn. Labadaa Tilmaamoodna (Kartida iyo Cilmiga) Rabbi baa Qur´aanka ku sheegay dhawr jeer, isagoo ku yiri carabka gabadhii Nabi Shucayb markay ka had-laysay Tilmaamaha Nabi Muuse: إن خير من استأجرت القَويُ الأمين Nabi Yuusufna markuu ka codsanayay Boqorkii Fircoon ahaa inuu ka dhigo wasiirka Lacagta wuxuu yiri waxaan ahay (Qof wax ilaalin kara, lehna Aqoon sare).
6 – Samir, adkaysi iyo Dulqaad, oo qof naxdin badan oo argagaxaya markuu waxyar oo khatara arko, ama oynaya sida Caruurta, Hogaan sare ma noqon karo, maxaa yeelay Oohintii iyo argagixi Ciidanka ayuu ku daaranayaa, halkaana ummaddii baa ku jabaysa.
7 – Iimaan dhab ah ama mabda uu rumaysan yahay si adagna u haysto, (Yaqiin) diyaarna u ah inuu Ummaddiisa ku hogaamiyo ku hormariyo. Labadaa tilmaamoodna Rabbi wuxuu ku sheegay Aayadan; وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
8 – Latashi iyo talaqaadasho, oo qofka aan dadka la tashanini wuxuu noqonayaa kaligii taliye, taana waa lagu jabaa, waana mid aan waqtiga xaadirka ah ka dharagsanahay xumaanteeda iyo dhibka ay keento. Waxaa ka mid ahaa dhaqankii Rasuulkeenii suubana (scw) inuu ku oran jiray Saxaabadiisa markasta oo ay ka hortimaado arin muhiima ahi (ashiiruu calayya ayuhanaas = dadyahaw tala i siiya ama ilataliya). Qofkii dadka la tashadaa caqligooduu la wadaagaa, kala faa’iidaystaa, wuxuuna ku abuuraa ixtiraam iyo qadarin, qofka dadka talada ka qaadana isagaa is cariiriya, dadkana wuu duleeyaa wuxuuna dareensiiyaa liid iyo dulinimo.
Qalinkii: Prof Hiirad
Previous articleJawaahir Rooble waa gabadhii ugu horreeysey ee Muslim ah ee abid garsoore kubadda cagta ah ka noqota UK + Sawirro
Next articleIlhaan Cumar oo markii ugu horreeysey khilaaftay gabdhaha ”The Squad” (Go’aankeeda oo Soomaalida saamayn kara)